Ndekupi kwamunoda kuenda vakafamba chitubu ichi? - Jomo Technology Co., Ltd
Spring ari kuuya, ungada kuenda parwendo chero nguva? Kana uchida kuenda uye kuongorora nyika yakasiyana? Unoda zvipe kana mhuri anoyevedza uye akakwana yezororo?
Kana mhinduro iri hongu, ndapota sarudza kuine zuva kubuda, zvino imi kuchashamisa chisingatarisirwi girl pakupera rwendo rwenyu.
Zvisinei, pane mubvunzo, iyo akaita chokufambisa sei uchida kusarudza, ndege kana kudzidzisa? Chero yaunosarudza, kana iwe akasvika nzvimbo panopera rwendo, unofanira rakaisvonaka pfupi-kure senga. Asi izvo pfupi-daro pakufamba mudziyo ndiyo yakanakisisa?
Mazuva ano, vakuru Electric Skateboards dzakakurumbira chaizvo vakawanda vasikana nevakomana. Hazvina chete chakanaka komiyuta mudziyo asiwo chaizvoizvo anogona kukwezva maziso evanhu. China Koowheel 2 chizvarwa yemagetsi longboard (Dual brushless nomusimboti-Motors) ane replaceable bhatiri rongedza, 2pcs bhatiri packs it hunogara 60km, enda yakareba. Muzvarirwo nokukurumidza wayo 30km / h, kumusoro kumhanya 42km / h, enda nokukurumidza. (zvichienderana uremu muviri uye mugwagwa ezvinhu) Kunze, ichi chinhu yemagetsi skateboard kubvumirwa kuti Air kufamba, haufaniri kunetseka pamusoro dambudziko chebhodhin'i zvachose.
Kana uri fashoni musikana kana mukomana, tiunze yemagetsi skateboard zvakakunakira sarudzo yako. Unogona kutanga kuongorora ino nyika chero nguva uye kunakidzwa nzvimbo dzokuona dzakanaka munzira. Dai une inofadza uye yakasiyana rwendo ari chitubu ichi.
Post nguva: Feb-28-2018